MAANTA OO KALE: Shaqo ka cayrintii David Moyes ee kooxda Man United, Saddexleeydii Van Persie, dhalashada Kaka & Mohamed Salah oo ku guuleystay… – Gool FM
(Yurub) 22 Abriil 2019. Aqristayaasheenna shafarta leh ku soo dhowaada xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay kubadda cagta, waxaana maanta ku soo qaadanaynaa shaqo ka cayrintii Macallin David Moyes ee kooxda Man United, saddexleeydii uu Van Persie ugu gacan geliyey horyaalkii 20-aad kooxda ku dheesha garoonka Old Traffrod, Mohamed Salah oo ku guuleystay PFA Player of the Year iyo dhalashada Kaka oo maanta ku aaddan.
>- Waxaan ku horreynayaa shaqo ka cayrintii David Moyes ee kooxda Man United, maanta oo kale shan sano ka hor sanadkii 2014-kii Manchester United ayaa shaqada ka cayrisay tababare David Moyes.
Macallin Moyes ayaa shaqada kooxda Manchester United haayey kaliya 10 bilood markii la cayrinayey maanta oo kale shan sano ka hor, waxaana uu kulankii ugu dambeeyey ee kooxda Man Utd uu hoggaamiyey ay guuldarro 2-0 kala kulmeen naadiga Everton.
>- Dhinaca kale Weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United, Robin van Persie ayaa lix sano laga joogaa markii uu kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford u gacan geliyey horyaalkii 20-aad, markii uu saddexleey u saxiixay.
Maanta oo kale 22 bishii Abril sanadkii 2013-kii, Robin van Persie ayaa saddexleey ama hat-trick u dhaliyey kooxda Manchester United kulan ay ka horjeedeen Aston Villa.
Van Persie ayaa goolashan saddexda ah ee kulankan laga dhaliyey kala saxiixay daqiiqadihii 02’aad, 13’aad iyo 33’aad ee qeybtii hore, waxaana ku jiray kubbad (Volley) ama dhul madhacdo ahayd oo uu ugu shubay kooxda Aston Villa.
Manchester United ayaana markaas noqotay kooxdii ugu horreysay ee Ingiriis ah oo 20 goor ku guuleysata horyaalka dalkaasi.
>- Geesta kale maanta waxa ay ku beegan tahay markii uu dunida ku soo biiray ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Brazil iyo kooxaha AC Milan & Real Madrid, Ricardo Izecson dos Santos Leite oo loo garan ogyahay Kaka.
Maanta oo kale 22-ka bishii April ee sanadkii 1982-kii ayuu dunida ku soo biiray Kaka, kaasoo maanta 37-sano jirsaday.
Kaka waxa uu Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kaga horreeyey ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or ee xiddiga ugu fiican adduunka isagoo qaatay sanadkii 2007.
Messi iyo Ronaldo inkastoo ay qaadeen abaal-marintan min shan jeer ayna yihiin kuwa ugu badan ee ku guuleystay Ballon d’Or, haddana waxa kaga horreeyey ku guuleysigeeda Kaka, xiddiga reer Argentina ee Leo ayaana abaal-marinta ku guuleystay sanadihii (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), halka Kabtanka Portugal ee CR7 uu hantay abaal-marintan sanadihii (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
>- Markaanna waa Mohamed Salah, weeraryahanka kooxda Liverpool ayaa maanta oo kale sanadkii hore ee 2018 ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiican sanadka horyaalka Premier League.
>- Salah ayaa abaal-marinta PFA Player of the Year ku qaatay kaddib markii 36 kulan oo uu u saftay Reds uu dhaliyey 32 gool, isla markaana dhiibay ama caawiyey 10 gool oo kale.
>- Dhinaca kalena maanta oo kale sanadkii hore ee 2018, Leroy Sané ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxda Manchester City oo ku guuleysta abaal-marinta da’yarka ugu fiican sanadka ee horyaalka Premier League.
Sané ayaa abaal-marintan PFA Young Player of the Year ku qaaday kaddib markii 32 kulan oo uu ciyaaray horyaalka uu ka dhaliyey 10 gool, isla markaana uu sameeyey 15 caawin, horyaalkana kula guuleystay kooxdiisa.